तपाइँको 'COVID-19 बाट मर्ने अधिकार' को ग्यारेन्टी हुनु पर्छ
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » स्वास्थ्य समाचार » तपाइँको 'COVID-19 बाट मर्ने अधिकार' को ग्यारेन्टी हुनु पर्छ
अष्ट्रेलिया ब्रेकिंग न्यूज • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • सरकारी समाचार • स्वास्थ्य समाचार • समाचार • मान्छे • जिम्मेवार • सुरक्षा • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • विभिन्न समाचार
अस्ट्रेलियाली सिनेटर पॉलिन ह्यान्सन
कुनै खोप आवश्यक छैन!
अष्ट्रेलियन सिनेटर ह्यान्सन जिद्दी गरिरहेकी छिन् कि उनी सहि थिइन् जब सम्म भनिएको छ कि अवस्थित खोपहरु आवश्यक परीक्षणहरु पार गरीसकेका छन् र भाइरस संग संक्रमित हुने को तुलना मा स्वास्थ्य को लागी धेरै कम जोखिम पैदा गर्दछ।
विरोधी टीकाकरण पागलपन सीनेटर Pauline Hanson द्वारा प्रतिध्वनित
सीनेटर पॉलिन ह्यान्सनले दाबी गरे कि कोभिड १ vacc को खोपको सही परीक्षण भएको छैन।
HE Pauline Hanson खोप कार्यक्रम को बारेमा विवादास्पद बयान को लागी परिचित छन्। उनी एक भ्याक्स विरोधी समर्थक हुन्।
Hanson टिप्पणी स्वास्थ्य पेशेवरहरु द्वारा आलोचना र अनलाइन ठट्टा।
अष्ट्रेलियाको दक्षिणपन्थी वन नेशन पार्टीका नेता, सिनेटर पॉलिन ह्यान्सनले घोषणा गरे कि त्यो ब्यापार र सरकारले मानिसहरुलाई खोप लगाउन "जबरजस्ती वा धम्की" गर्नुहुँदैन र मानिसहरु लाई कोभिड -१ vacc को खोप अस्वीकार गर्न को लागी एक विकल्प हुनु पर्छ। उनीहरु भाइरस बाट मर्छन्।
यो एकppears यस्तो आन्दोलनयुके र अन्य देशहरुमा पनि चलिरहेको छ।
हान्सनले भने, "मानिसहरुलाई अवसर दिनुहोस्, खोप लगाउनुहोस् ... र यदि मानिसहरु, जस्तै मँ, जो खोप लगाएको छैन, तब म COVID-१ get पाउँछु र मँ यो बाट मर्छु, यो मेरो छनौट हो," ह्यान्सनले भने।
कोभिड 19१ vacc को खोपको सही परीक्षण नभएको दाबी गर्दै सीनेटरले भनिन् कि उनी "" खोप लगाउन धम्की वा धम्की दिइने छैन। "
ह्यान्सन जोड दिईरहेकी छिन् कि उनी सहि थिइन् जब सम्म भनिएको छ कि अवस्थित खोपहरु आवश्यक परीक्षणहरु पार गरीसकेका छन् र भाइरस संग संक्रमित हुने को तुलना मा स्वास्थ्य को लागी एक धेरै कम जोखिम पैदा गर्दछ।
Hanson चलिरहेको खोप कार्यक्रम को बारे मा विवादास्पद बयान गर्न को लागी जानिन्छ। गत महिना, एक लोकप्रिय सिडनी रेडियो शो मा निर्माताहरु एक साक्षात्कार को दौरान एक 30-सेकेन्ड ढिलाइ संग प्रसारित भएको बेला उनको टीकाकरण विरोधी टिप्पणी को केहि 'सुत्न' छनौट गर्नुभयो।
ह्यान्सनको टिप्पणी स्वास्थ्य पेशेवरहरु द्वारा आलोचना गरिएको थियो र टिप्पणीकर्ताहरु संग अनलाइन व्यापक रूप मा ठट्टा गरिएको भन्दै भ्याक्सिन बिरोधि सन्देश फैलाएर हान्सन अरुको जीवन लाई खतरामा पार्छ। "एक खतरनाक मूर्ख," एक व्यक्ति अनलाइन लेखे।
१ residential सेप्टेम्बर १ Australia देखि अष्ट्रेलियाका सबै आवासीय वृद्ध हेरचाह गर्ने कामदारहरुको लागी खोप अनिवार्य हुनेछ। प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन आज घोषणा गरियो कि देश को सरकार को एक व्यापक खोप जनादेश को लागी कुनै योजना छैन।
"हामी जान्दछौं कि त्यहाँ एक खोप मा एक अंतर्निहित प्रोत्साहन छ," प्रधानमन्त्रीले भने। "तपाइँ [भाइरस] पाउने सम्भावना कम छ, तपाइँ गम्भीर बिरामी हुने सम्भावना कम छ र साथीलाई दिने सम्भावना कम छ।"
सरकारका अनुसार अहिलेसम्म १.22.5 बर्ष भन्दा माथिका २२.५% अष्ट्रेलियालीहरु लाई पूर्ण रुपमा खोप लगाइएको छ र ४४.२% ले खोपको कम्तीमा एउटा खुराक पाएका छन्।
अक्टोबर 21, 2021 मा 01: 32
विलियम आर म्याकफिट भन्छन्:
अगस्त २,, २०२० ० 10::2021
खोपहरु को पूर्ण परीक्षण गरीएको छैन! तिनीहरू प्रयोगात्मक, आपतकालीन उपयोग मात्र हुन्। कुनै ध्यान अन्य रोकथाम उपायहरु लाई दिइएको छ कि थोरै वा कुनै साइड इफेक्टहरु छन्, विशेष गरी भिटामिन D3। कसैले पनि वैध भन्न सक्दैन कि खोपहरु को प्रभाव भाइरस को प्रभाव को रूप मा खराब छैन। वास्तवमा त्यहाँ डाक्टरहरु छन् जो भन्छन् कि उनीहरु विश्वास गर्छन् कि खोप अन्ततः भाइरस भन्दा धेरै मानिसहरु लाई मार्नेछ। हामीसंग खोपहरुको बारेमा दीर्घकालीन जानकारी छैन। तपाइँ यस कथामा मानिसहरुलाई भ्रामक हुनुहुन्छ।